သေးသေးသွယ်သွယ်ကောင်မလေးတိုင်း ဗီရိုထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆောင်းဖက်ရှင် (၅)မျိုး - For her Myanmar
သေးသေးသွယ်သွယ်ကောင်မလေးတိုင်း ဗီရိုထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆောင်းဖက်ရှင် (၅)မျိုး
နဂိုတည်းကမှ သေးသေးလေး ချစ်စရာလေးပါဆို.. ဒါလေးတွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ..အိုက်စ်
ယောင်းတို့ထဲမှာ Petite ကောင်မလေးတွေ ရှိလား ???
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့အတွက် Petite ဆိုတာ ဘယ်လိုကောင်မလေးမျိုးကို ခေါ်တာလဲဆိုတာ အရင်ကြည့်ရအောင်နော်..
Petite ဆိုတာ တကယ်တော့ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရပ်အမြင့်နဲ့ အချိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ခေါ်ဝေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတိုင်း ရှင်းပြရင် ရှုပ်မှာစိုးလို့ Megan က ပုံလေးနဲ့ ပြပေးမယ်နော်။
petite ဆိုတာ ဒါလေးပေါ့..
ကဲ Petite ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကို ခေါ်တာလဲ သိပြီးပြီဆိုရင်တော့ – Petite လေးတွေအတွက် ဆောင်းတွင်းမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ့် ဖက်ရှင်လေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Megan တို့ ရန်ကုန်မှာကလည်း သိတဲ့အတိုင်း မနက်ပိုင်းလေးလောက်သာ ဆောင်းရဲ့ အငွေ့အသက် အေးသယောင်ယောင်လေး ခံစားရတာဖြစ်ပြီး နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကျတော့ မအေးတော့ဘဲ ပုံမှန်လောက်ပဲ ဆိုတော့ ဆောင်းတွင်းမှာ ဘယ်လိုဖက်ရှင်တွေကို ဝတ်သင့်တယ်၊ ဘာတွေကို ကြိုတင်စုဆောင်းထားရမယ်ဆိုတာလေးတွေ ကြည့်ကြရအောင် ယောင်းတို့ရေ..
၁။ မီနီစကတ်လေးတွေကို ရွေးချယ်ပါ။
ခြေသလုံးလောက်အရှည်ရှိတဲ့ Midi စကတ်တွေ၊ ခြေမျက်စိထိ အရှည်ရှိတဲ့ Maxi စကတ်တွေအစား ပေါင်လယ်လောက်ပဲ ရှည်တဲ့ မီနီစကတ်တိုတိုကားကား လေးတွေက Petite ယောင်းတို့ အတွက် ဒီနှစ်မှာ လုံးဝ ခေတ်စားလာမှာ အသေချာပါတဲ့နော်။ အရမ်းအေးတဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ နေရာမျိုးကို ခရီးထွက်မယ် ဆိုရင်တော့ အောက်က stocking (အသားကပ်ဘောင်းဘီ) ထူထူလေး ခံဝတ်နိုင်ပါတယ်။ မီနီစကတ်ကို ဝတ်မယ်လို့ ရွေးချယ်ထားရင်တော့ ဖိနပ်ကို ဒေါက်အချွန်ပါတာမျိုးလေး စီးပါလို့..
၂။ ခါးပေါ်တက်ဝတ်ရတဲ့ ဘောင်းဘီ
PAPER-BAG WAIST PANTS လို့ ခေါ်တဲ့ ခါးပေါ်ထိ တက်ဝတ်ရတဲ့ ဘောင်းဘီပွပွလေးတွေကလည်း petite လေးတို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ပေါ်လွင်စေတာမို့ အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်တွေထဲက တစ်ခုပေါ့နော်။ ခြေထောက်တွေကို ပိုရှည်တဲ့ အသွင်ဖြစ်စေဖို့ ဒေါက်ဖိနပ်အစား ထိပ်ချွန်တဲ့ ထိပ်ပိတ် Flat တစ်ရံကိုသာ စီးလိုက်ပါ။ အရပ်ရှည်သယောင် ထင်ရဖို့ ဒေါက်ဖိနပ်ထူထူမြင့်မြင့်ကြီးတွေ စီးရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆမှားကြီးကို ခေါင်းထဲက ထုတ်ထားလိုက်ပါတော့။ တကယ်က အဲဒီလို စီးထားမှသာ အရပ်ပုလို့ စီးရတာဖြစ်ကြောင်း ပိုပြီး သိသာထင်ရှားစေလို့ပါ။
၃။ ဆွယ်တာပါးပါး ဂါဝန်တစ်ထည်
V shape လည်ပင်းပေါက်ပါတဲ့ ဆွယ်တာခပ်ပါးပါး ဂါဝန်တစ်ထည်နဲ့လည်း ဆောင်းတွင်းမှာ အထာကျကျ ပဲများလို့ ရတယ်နော် ယောင်းတို့။ ဘာ အဆင်တန်ဆာမှတောင် မလိုဘူး။ V shape Sweater Dress လေးနဲ့ အောက်က Flat shoes လေး တစ်ရံနဲ့ဆိုရင်တောင် အတော် အထာကျနေပါပြီ။
Related Article >>> ဆောင်းရာသီနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်လာမယ့် လက်သည်းနီအရောင် (၅) မျိုး
၄။ Moto Jacket
ဆောင်းတွင်းနဲ့ Moto Jacket ဆိုတာက ခွဲလို့မရတဲ့ မပါမဖြစ် ဖက်ရှင်တစ်ခုပါ။ Moto Jacket တွေဟာ ခပ်မိုက်မိုက် ဖက်ရှင် ဖြစ်တဲ့အပြင် Petite လေးတွေကို ပိုပြီး ရှည်သွယ်သွားစေတဲ့ အသွင် ဖြစ်စေပါသေးတယ်။ Moto Jacketကို အောက်က ခြေမျက်စိပေါ်တဲ့ Skinny Jeans လေးတစ်ထည်နဲ့ တွဲဝတ်ပြီး အောက်က sneakers လေး စီးလိုက်ရင်တော့ … WOW!!! အရမ်းကို မိမိုက်နေမှာနော်။
၅။ Wrap Dress
WRAP DRESS ဆိုတာကျတော့ petite တွေနဲ့ ခွဲမရတဲ့ ဖက်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်ပြန်ရော။ ခါးကိုပိုပြီး သေးသွယ်သယောင်ထင်ရစေတဲ့ Wrap Dress (ပုံထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်)တွေက အရမ်းမအေးတဲ့ ရန်ကုန်ဆောင်းနဲ့ အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်လေးနဲ့သာ တွဲလိုက်ရင် မြင်တဲ့သူတိုင်း နှစ်ခါပြန် ငေးကြည့်မှာ ယုံ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Petite ယောင်းလေးတို့အတွက် ဆောင်းတွင်းမှာ ဖက်ရှင်ကျကျ ရှိုးထုတ်လို့ ရပါပြီလို့… မမေ့နဲ့နော်…. ဘာပဲဝတ်ဝတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု ရှိနေဖို့က အဓိက ကျပါတယ်.. 😉
References: Pinterest , Jeetly
နဂိုတညျးကမှ သေးသေးလေး ခဈြစရာလေးပါဆို.. ဒါလေးတှနေဲ့ ဆိုရငျတော့ ..အိုကျဈ
ယောငျးတို့ထဲမှာ Petite ကောငျမလေးတှေ ရှိလား ???
ဒီမေးခှနျးကို ဖွဖေို့အတှကျ Petite ဆိုတာ ဘယျလိုကောငျမလေးမြိုးကို ချေါတာလဲဆိုတာ အရငျကွညျ့ရအောငျနျော..
Petite ဆိုတာ တကယျတော့ ခန်ဓာကိုယျ အလေးခြိနျကို မူတညျပွီး ဆုံးဖွတျတာ မဟုတျပါဘူး။ အရပျအမွငျ့နဲ့ အခြိုးအစားပျေါ မူတညျပွီး ချေါဝျေါတဲ့ အချေါအဝျေါ တခုပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီတိုငျး ရှငျးပွရငျ ရှုပျမှာစိုးလို့ Megan က ပုံလေးနဲ့ ပွပေးမယျနျော။
petite ဆိုတာ ဒါလေးပေါ့..
ကဲ Petite ဆိုတာ ဘယျလိုမြိုးလေးတှကေို ချေါတာလဲ သိပွီးပွီဆိုရငျတော့ – Petite လေးတှအေတှကျ ဆောငျးတှငျးမှာ မရှိမဖွဈလိုအပျမယျ့ ဖကျရှငျလေးတှကေို ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
Megan တို့ ရနျကုနျမှာကလညျး သိတဲ့အတိုငျး မနကျပိုငျးလေးလောကျသာ ဆောငျးရဲ့အငှအေ့သကျ အေးသယောငျယောငျလေး ခံစားရတာဖွဈပွီး နလေ့ယျပိုငျးလောကျကတြော့ မအေးတော့ဘဲ ပုံမှနျလောကျပဲ ဆိုတော့ ဆောငျးတှငျးမှာ ဘယျလိုဖကျရှငျတှကေို ဝတျသငျ့တယျ၊ ဘာတှကေို ကွိုတငျစုဆောငျးထားရမယျဆိုတာလေးတှေ ကွညျ့ကွရအောငျ ယောငျးတို့ရေ..
၁။ မီနီစကတျလေးတှကေို ရှေးခယျြပါ။
ခွသေလုံးလောကျအရှညျရှိတဲ့ Midi စကတျတှေ၊ ခွမေကျြစိထိ အရှညျရှိတဲ့ Maxi စကတျတှအေစား ပေါငျလယျလောကျပဲ ရှညျတဲ့ မီနီစကတျတိုတိုကားကား လေးတှကေ Petite ယောငျးတို့ အတှကျ ဒီနှဈမှာ လုံးဝ ခတျေစားလာမှာ အသခြောပါတဲ့နျော။ အရမျးအေးတဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ နရောမြိုးကို ခရီးထှကျမယျ ဆိုရငျတော့ အောကျက stocking (အသားကပျဘောငျးဘီ) ထူထူလေး ခံဝတျနိုငျပါတယျ။ မီနီစကတျကို ဝတျမယျလို့ ရှေးခယျြထားရငျတော့ ဖိနပျကို ဒေါကျအခြှနျပါတာမြိုးလေး စီးပါလို့..
၂။ ခါးပျေါတကျဝတျရတဲ့ ဘောငျးဘီ
PAPER-BAG WAIST PANTS လို့ ချေါတဲ့ ခါးပျေါထိ တကျဝတျရတဲ့ ဘောငျးဘီပှပှလေးတှကေလညျး petite လေးတို့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကို ပျေါလှငျစတောမို့ အကောငျးဆုံးဖကျရှငျတှထေဲက တဈခုပေါ့နျော။ ခွထေောကျတှကေို ပိုရှညျတဲ့ အသှငျဖွဈစဖေို့ ဒေါကျဖိနပျအစား ထိပျခြှနျတဲ့ ထိပျပိတျ Flat တဈရံကိုသာ စီးလိုကျပါ။ အရပျရှညျသယောငျ ထငျရဖို့ ဒေါကျဖိနပျထူထူမွငျ့မွငျ့ကွီးတှေ စီးရမယျဆိုတဲ့ အယူအဆမှားကွီးကို ခေါငျးထဲက ထုတျထားလိုကျပါတော့။ တကယျက အဲဒီလို စီးထားမှသာ အရပျပုလို့ စီးရတာဖွဈကွောငျး ပိုပွီး သိသာထငျရှားစလေို့ပါ။
၃။ ဆှယျတာပါးပါး ဂါဝနျတဈထညျ
V shape လညျပငျးပေါကျပါတဲ့ ဆှယျတာခပျပါးပါး ဂါဝနျတဈထညျနဲ့လညျး ဆောငျးတှငျးမှာ အထာကကြ ပဲမြားလို့ ရတယျနျော ယောငျးတို့။ ဘာ အဆငျတနျဆာမှတောငျ မလိုဘူး။ V shape Sweater Dress လေးနဲ့ အောကျက Flat shoes လေး တဈရံနဲ့ဆိုရငျတောငျ အတျော အထာကနြပေါပွီ။
Related Article >>> ဆောငျးရာသီနဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးဖွဈလာမယျ့ လကျသညျးနီအရောငျ (၅) မြိုး
ဆောငျးတှငျးနဲ့ Moto Jacket ဆိုတာက ခှဲလို့မရတဲ့ မပါမဖွဈ ဖကျရှငျတခုပါ။ Moto Jacket တှဟော ခပျမိုကျမိုကျ ဖကျရှငျ ဖွဈတဲ့အပွငျ Petite လေးတှကေို ပိုပွီး ရှညျသှယျသှားစတေဲ့ အသှငျ ဖွဈစပေါသေးတယျ။ Moto Jacketကို အောကျက ခွမေကျြစိပျေါတဲ့ Skinny Jeans လေးတဈထညျနဲ့ တှဲဝတျပွီး အောကျက sneakers လေး စီးလိုကျရငျတော့ … WOW!!! အရမျးကို မိမိုကျနမှောနျော။
WRAP DRESS ဆိုတာကတြော့ petite တှနေဲ့ ခှဲမရတဲ့ ဖကျရှငျတဈခု ဖွဈပွနျရော။ ခါးကိုပိုပွီး သေးသှယျသယောငျထငျရစတေဲ့ Wrap Dress (ပုံထဲမှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျနျော)တှကေ အရမျးမအေးတဲ့ ရနျကုနျဆောငျးနဲ့ အဆငျပွစေပေါတယျ။ ဒေါကျမွငျ့ဖိနပျလေးနဲ့သာ တှဲလိုကျရငျ မွငျတဲ့သူတိုငျး နှဈခါပွနျ ငေးကွညျ့မှာ ယုံ။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ Petite ယောငျးလေးတို့အတှကျ ဆောငျးတှငျးမှာ ဖကျရှငျကကြ ရှိုးထုတျလို့ ရပါပွီလို့… မမနေဲ့နျော…. ဘာပဲဝတျဝတျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှု ရှိနဖေို့က အဓိက ကပြါတယျလို့.. 😉
Tags: Dress, Fashion, Height, Jacket, Petite, skirt, tips
အသက် ၃၀ မမတို့အရွယ်မှာ နုမြဲလှဆဲ ဖြစ်စေဖို့ ဒါလေးတွေစားပါ…